Xashiishka (1) Warshad - Shiinaha Xoqda (1) Soosaarayaasha, Alaab-qeybiyeyaasha
Nadiifiyaha Kaabashada / Batariga - Nadiifiyaha SC-450 / D
Astaamaha Naqshadeynta gawaarida hore ee gaarka ah, way ku habboon tahay socodka. Dhejin karaa bacda boodhka gudaha, fudud oo nadiif ah. Si otomatig ah u hagaaji dhererka rullaluistemadka, waxtarka nadiifinta sare! Shayga Farsamada SC450 SC450D Voltage 220-240V / 50Hz 40V Power 1180W 580W Ballaaran hawl 450mm 450mm Mashiinka Qalalan 220V / 1000W 500W Roll brush motor 24V / 180W 24V / 180W Roll Roll Speed ​​230RPM 230RPM Capacity 20L 5L Cable 12m - Miisaanka 38kg 64.5kg Miisaanka Guud 40.2kg 66kg Xirxirida 950x540x31 ...
Qalajiye fuulid-qalajiye waa mashiin lagama maarmaanka u ah nadiifinta dhulka, kaas oo leh hawlgal dabacsan, naqshadeynta burushyada labada dhinac iyo hufnaanta nadaafadda sare. Waxay khuseysaa goobta dhismaha dowladda hoose, laba jibbaaran, suuqyada waaweyn, warshadaha, aqoon isweydaarsiga iyo meelo badan oo dadweyne ah.
Badeecadani waa mashiinka korantada nadiifinta ugu fiican ee lagama maarmaanka u ah nadiifinta dhulka. Si sahlan loo wado, u jajaban in lagu shaqeeyo, naqshad hal saxan iyo laba jibbaar ah, waxtarka nadiifinta oo aad u saraysa, matoor nuugid xoog leh si loogu shubo wasakhda bullaacadaha si isku mid ah.
Waxay ku habboon tahay goobaha dhismaha ee dawladda hoose, fagaarayaasha waaweyn, dukaamada waaweyn, aqoon isweydaarsiyada warshad, iwm.
Drier-Socodka Dab-xoqiyaha leh Battery -H8101 / H8102
Nidaamka isticmaalka qalajiye qalajiyaha ayaa ah mid aad u fudud oo fudud. Qalajiyeyaasha wax lagu nadiifiyo waxay shaqaaleeyaan qaybta xoqidda hore si ay sagxaddaada u siiso nadiif qoto dheer iyadoo la isticmaalayo biyo iyo kiimikooyin. Biyaha haraaga ah ee wasaqda ah ayaa halbeeg halbeeg ah lagu qaadayaa qeybta qalajinta gadaal gadaal ee mashiinka, taas oo inta badan ka kooban isku soo ururin iyo isku dhaf nuugid ah oo wasakhda iyo dheecaannada xad dhaafka ah ku ridaya haanta wax lagu xareeyo.
Auto xoqe Drier-SC50
Waxtarka sare iyo nadiif, si loo daboolo baahiyaha kala duwan ee deegaanka. Iyadoo aan loo eegin makhaayada, hudheelka, makhaayada, hoolka Coffee, shineemo, Xarunta Madadaalada, jimicsiga, dhismooyinka xafiisyada. Jawiga cidhiidhiga ah ee noocan ah iyo farqiga ayaa u isticmaali kara si xor ah, iyada oo la nadiifinayo dhammaystirka tooska ah ee dib-u-warshadaynta bullaacadaha, ayaa si dhab ah u gaadha saamayn nadiifin oo dhammaystiran.